[အခန်းဆက်] မြန်မာနိုင်ငံကအချစ်ရှိသူမိတ်ဆွေများဆီသို့ | yathar Magazine
နိုဝငျဘာ 23, 2019
yathar Magazine!! ပထမဦးစွာ!!!
ကျွန်မနာမည်ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ပါ ! ! ! !
TOKYO ODEN BOYS ရဲ့ kitty လို့ခေါ်ပါတယ် !!!
ယခုလမှစပြီးအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းTOKYO ODEN BOYSအဖွဲ့တွေကအခန်းဆက်ပုံစံရေးသားဖော် ပြခွင့်ရတဲ့အဖွဲ့ဝင်ထဲမှKittyက(ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ပုံစံကိုနာမည်ပြောင်ခေါ်တဲ့စတိုင်ပါ)ဘယ်အကြောင်းအရာကိုအခန်းဆက်နေနဲ့ရေးရင်ကောင်းမလဲလို့?
“နိုး၊ မဟုတ်ဘူး၊ ညမိုးချုပ်နေပြီရေခဲမုန့်မစားသင့်တော့ဘူး”
ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ Date ရင်
လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်!!! (ရေခဲမုန့်ကိုတစ်ကြိမ်ကြားညှပ်ပြီးပြောမိလို့စိတ်မကောင်းပါဘူး။)
၂။ ကောင်လေးနဲ့ကားလျှောက်မောင်းမယ်။ ဂရုတစိုက်ကားမောင်းရင်းလျှောက်လည်ရမလား။
ဒါတင်မကသေးဘူးရှင့်! အရသာရှိပြီးသန့်ရှင်းလှပ တဲ့ဆိုင်လေးဆိုပိုအဆင်ပြေတယ်။
TOKYO ODEN BOYS အဖွဲ့ဝင်တွေရေးထားတဲ့အခန်းဆက်တွေကိုရောဖတ်ပြီးကြပြီလား?
အားကီရဲ့ ကြွက်သားတို့ ပရိုတင်းတို့
ဖက်တီးရဲ့ ၀ိတ်လျော့နည်းတို့ ဆီများတာတို့
“မွေးနေ့မှာ surprise လုပ်ပေးချင်တယ်”
yathar Magazine!! ပထမဦးစှာ!!!
ကြှနျမနာမညျဝတျမှုနျရှရေညျပါ ! ! ! !
TOKYO ODEN BOYS ရဲ့ kitty လို့ချေါပါတယျ !!!
ယခုလမှစပွီးအပတျစဉျစနနေတေို့ငျးTOKYO ODEN BOYSအဖှဲ့တှကေအခနျးဆကျပုံစံရေးသားဖျော ပွခှငျ့ရတဲ့အဖှဲ့ဝငျထဲမှKittyက(ပထမဆုံးတှတေဲ့ပုံစံကိုနာမညျပွောငျချေါတဲ့စတိုငျပါ)ဘယျအကွောငျးအရာကိုအခနျးဆကျနနေဲ့ရေးရငျကောငျးမလဲလို့?
“နိုး၊ မဟုတျဘူး၊ ညမိုးခြုပျနပွေီရခေဲမုနျ့မစားသငျ့တော့ဘူး”
ခဈြသူကောငျလေးနဲ့ Date ရငျ
လို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တယျ!!! (ရခေဲမုနျ့ကိုတဈကွိမျကွားညှပျပွီးပွောမိလို့စိတျမကောငျးပါဘူး။)
၂။ ကောငျလေးနဲ့ကားလြှောကျမောငျးမယျ။ ဂရုတစိုကျကားမောငျးရငျးလြှောကျလညျရမလား။
ဒါတငျမကသေးဘူးရှငျ့! အရသာရှိပွီးသနျ့ရှငျးလှပ တဲ့ဆိုငျလေးဆိုပိုအဆငျပွတေယျ။
TOKYO ODEN BOYS အဖှဲ့ဝငျတှရေေးထားတဲ့အခနျးဆကျတှကေိုရောဖတျပွီးကွပွီလား?
အားကီရဲ့ ကွှကျသားတို့ ပရိုတငျးတို့
ဖကျတီးရဲ့ ဝိတျလြော့နညျးတို့ ဆီမြားတာတို့
“မှေးနမှေ့ာ surprise လုပျပေးခငျြတယျ”